သတ္တု Frame ကိုအိပ်ရာ
The metal frame couch is designed modern elegance with graceful arms, French-seam detailing, and loose, luxurious cushions. That makes it look both timeless and contemporary. The seat and back cushions useaunique, eco-friendly synthetic-down feather to fill in. The frame is constructed with 100% stainless metal steel and the round corner providesasafer experience forachild's household. Round out the spectacular charm of your living room and impress your guests withacenterpiece that reflects your impeccable taste in furniture. This three-seater metal frame couch offers plush pillow-like comfort and stunning black legs to make your decor both outstanding delightful. Featuringarose-red tonal color and recliner armrests, ဤဆိုဖာသည်သင်၏အတွင်းပိုင်းအပြင်အဆင်၏စီးဆင်းမှုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သောပေါ့ပါးသောကြေညာချက်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်သည်, ပွင့်လင်းမှုကိုဖန်တီးသည်, သန့်ရှင်း။ ကျယ်ဝန်းသောဧည့်သည်များပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ရန်နေရာ.
ခေတ်မီဒီဇိုင်း: သန့်ရှင်းစွာဖြင့်, တိကျသောလိုင်းများ, ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဖာသည်သင်၏အတွင်းခန်းအတွက်စံပြခေတ်မီအသုံးအဆောင်ဖြစ်သည်. recliner armrests ဖြင့်ပြီးသည်, အနက်ရောင်ခြေထောက်များ, နှင့် tonal piping, ၎င်းသည် chic ကိုပေးသည်သာမက, minimalistic အသွင်အပြင်သာမကမယုံနိုင်စရာဖွဲ့စည်းပုံကိုပါပေးသည်.
ခေါင်းအုံးများကိုဖယ်ရှားပါ: ဤသံမဏိဘောင်ခုံပေါ်တွင်ထိုင်သည့်အခါသက်တောင့်သက်သာနှင့်စတိုင်လ်ကိုအပိုထည့်ပေးသောသုံးခေါင်းအုံးများပါ ၀ င်သည်. ကူရှင်ကိုလိုအပ်လျှင်အလွယ်တကူဖြုတ်။ ဆေးနိုင်သည်.
ခေါင်းအုံးပုံစံကျောပိုးအိတ်: ကျွန်ုပ်တို့၏သံမဏိဘောင်ဆိုဖာကိုအနီရောင်အနီရောင်ဖြင့်အကြမ်းခံသည်, မည်သည့်အခန်းကိုမဆိုသန့်စင်သောအသွင်အပြင်နှင့်အပြုသဘောဆောင်သောခံစားမှုပေးခြင်း. backrest သည် plush ကိုပေးသည်, ခေါင်းအုံးကဲ့သို့ဒီဇိုင်းသည်မမေ့နိုင်သောနားခိုရာအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်.
သံမဏိသံမဏိဘောင်: သံမဏိဘောင်ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်, ဤဆိုဖာကိုအကြမ်းခံပြီးထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ထားသည်. ဤသတ္တုသံမဏိဘောင်သည်ဤအပိုင်းသို့ချောမွေ့သောထိမိစေသည်, ဤအရာသည်သင်၏အိမ်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်.
အတိုင်းအတာများ: သင်နှင့်သင့်ပရိဘောဂများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားရှိသောဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ. ဤသတ္တုဘောင်ဆိုဖာသည် 100L*89W*73H ဖြစ်သည်; 163L*89W*73H; 226L*89W*73H. မင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိုဖာရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ထပ်ထည့်မှုကြောင့်မင်းရဲ့နေရာကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုတာမင်းချစ်လိမ့်မယ်.
အမျိုးအစား: Room ည့်ခန်းသုံးဆိုဖာပရိဘောဂ; ဟိုတယ် Suite; ဟိုတယ်အခန်း; အိပ်ခန်းပရိဘောဂ
ပစ္စည်း: အထည်; အောက်ဆီဂျင်; ရေမြှုပ်; အမွေး
ထုတ်ကုန်အမည်: ငါ့ကိုtal frame အိပ်ရာခင်း
ခြေထောက်ပစ္စည်း သတ္တု, သံမဏိ
အပေါ်အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ): 100L*89W*73H; 163L*89W*73H; 226L*89W*73H
ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ): 105L*89W*73H; 168L*89W*73H; 231L*89W*73H
အလေးချိန်: 35ဒေါ်လာ; 48ဒေါ်လာ; 71ဒေါ်လာ
MOQ:5အစုံ
ထိုင်ခုံဖြည့်ပစ္စည်း Synthetic Fiber ပါ; ဆင်းတယ်